प्रचण्ड कामरेड ! काँध फेर्ने कि काँधमा काँध मिलाउने
शनिबार, १८ जेष्ठ, २०७६
प्रचण्डको यो बोली छिमेकी देश भारतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७३ भदौ ३१ गते राजकीय भ्रमणमा दिल्ली पुगेकै बेला यता अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेका लोकमानसिंह कार्कीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि मुद्दा चलाउने भनिदिंदा उताको वार्ता असहज भएको अवस्थासँग तुलना गर्नेहरु पनि छन् ।
जे होस्, प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली टेकेकै दिन गतवर्ष एकताका बेला सत्ता साझेदारीको गोप्य भनिएको सहमतिपत्र ठ्याक्कै त्यसैबेला बाहिर आएपछि धेरैको मनमा झस्को पसेको छ । र नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको बिऊ रोपिएको त होइन फेरि भनेर एउटा तप्का चिन्तित हुन पुगेको देखिन्छ । यो चिन्तालाई मान्ने हो भने प्रचण्डको कुबेलाको यो बोलीले अस्थिरताको ‘खिल’ गाडिदिएको छ, जुन धेरै वर्षसम्म देश र पार्टीलाई विझाईरहनेछ ।
त्यसो त गुणको पैंचो, पानीको पैंचो वा पीठोको पैंचो जस्तो रुपमा लिने कि विज्ञापनको विषयका रुपमा अघि बढाउने त्यो बेग्लै विषय पनि बनाउन सकिन्छ । चुनावका ताका साझा घोषणा पत्र मार्फत् रोपेका विरुवा हुर्काउने, देखेका सपनालाई मूर्त रुप दिने र परिकल्पनालाई व्यवहारमा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेकपाकै अध्यक्ष ओली नेतृत्वको यो सरकार जुटिरहेका बेला आएका यस्ता अभिव्यक्तिले अस्थिरता बढाउन मलजल गर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।
पार्टी एकताको मर्म र जनताको भावना अनुरुप अघि बढ्यौं भने घुमिफिरी शीर्ष तहकै नेताहरु नै हो बागडोर सम्हाल्ने । किन आत्तिनुपर्‍यो ? किन सिंगौरी खेल्नुपर्‍यो ? किन जुँगाको लडाई लड्नुपर्‍यो । १५ महिना पछि को के हुने भनेर अहिले नै किन औला भाँचृेर बस्नुपर्‍यो । पार्टी रहे, पार्टीमा कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति रहे, जनताको अपार समर्थन् प्राप्त रहीरहे आलोपालो आइहाल्छ, रुँदै हिंड्नुपर्दैन । तर पार्टी कमजोर भयो र कार्यकर्ताहरु तिरस्कृत भए, जनताको भावनामाथि ठेस पुग्यो भने भन्न सकिंदैन । जुन कुरा नेतृत्वले हमेसा हेक्का राख्नुपर्छ ।
त्यसैले नेकपाको भविष्यमा कमरेड प्रचण्ड नेपाली महाथिर बन्ने अवसर गुमाउन हुँदैन । अहिले सरकारलाई अस्थिर बनाउनु भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउनु, वितृष्णा बढाउनु र प्रकारान्तरले बामपन्थीको सरकारको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने मानक स्थापित गर्न खोज्नु जस्ता विषय बलशाली बन्न पुग्नेछन् । त्यसैले नेताहरुले बरालिएको मनलाई संयमित राख्नुपर्दछ । शीर्ष नेताहरु एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकार र पार्टीको गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढाउन गियर बदल्न जरुरी छैन । यस विषयमा सघन छलफल, बहस हुनुपर्दछ ।
खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । स्वस्थ आलोचना सुन्नु पनि पर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारी र वोध के हो ? भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । एक्लै हिंडेर कोही कतै पुग्दैन । नत कसैलाई निषेध गरेर नै अघि बढ्न सकिन्छ । मूलतः पार्टीका दुई अध्यक्ष खुला हृदयका साथ काँध फेर्ने होइन काँधमा काँध मिलाएर पार्टी एकताको स्प्रिड र जनभावना अनुरुप अघि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रचण्ड कमरेडका लागि नेकपामा उज्यालो र सुदूर भविष्य छ । तसर्थ कमरेड प्रचण्ड नाङ्लो हुने कि चाल्नो हुने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । नाङ्लोले असल चिज राख्छ र कुँडाकर्कट अर्थात् नराम्रो चिज फ्याँक्छ । चाल्नोले असल चिज छिराउँछ, नचाहिने चिजमात्र संग्रह गर्छ ।